July 9, 2021 - ApannPyay Media
July 9, 2021 by ApannPyay Media
ခုလိုကိုဗစ်ကာလမှာ အသက်ရှုကြပ်လာပီး အောက်စီဂျင်မရသလို ဖြစ်ပါက ပင်စိမ်းပင်ကိုအသုံးပြုပါ
ခုလိုကိုဗစ်ကာလမှာ အသက်ရှုကြပ်လာပီး အောက်စီဂျင်မရသလို ဖြစ်ပါက ပင်စိမ်းပင်ကိုအသုံးပြုပါ ရုတ်တရက် အသက်ရှုကြပ်လာပြီးအောက်စီဂျင်လဲ မရခဲ့သေးရင်ပင်စိမ်းရွက်ကိုထောင်းပြီး အရည်ကိုဆားခတ်ပြီးသောက်ပါ။ပင်စိမ်းပင်က နာရီပေါင်း၂ဝကြာအောင် အောက်ဆီဂျင်ကို ထုတ်လွှတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ ပင်စိမ်းပင် အိမ်မှာစိုက်ပျိုးသင့်သော အကြောင်းရင်း 1. ပင်စိမ်း အရွက်ကိုနေတိုင်းစားပေးခြင်းအားဖြင့် အူလမ်းကြောင်း ဝမ်းဗိုက်နှင့် ပါးစပ်တွင်ဖြစ်တက်သောရောဂါများ ကင်းဝေးပြီး အစာခြေစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေပါသည် ။ 2. ပင်စိမ်း အရွက်ကို ရေထဲတွင်စိမ်ပြီး နေတိုင်းသောက်လာပါက ဆီးချိုရောဂါ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးသည်။ 3. ပင်စိမ်း အရွက်ကို ပထမရက် ရေချိုးမည့်ရေတွင် စိမ်ထားပြီး နောက်နေ့ရေချိုးပါက ချွေးအနံ့ မထွက်အောင်ကာကွယ်ပေးသည်။ 4. ပင်စိမ်း အရွက်ကို သံပုရာရည်ရော၍ ကြိတ်ပြီး အရေပြားပေါ်တွင်လိမ်းပေးပါက အရေပြားရောဂါများဖြစ်သောဝဲ နှင်းခူ နှင့် ယားနာများပျောက်ကင်းသည် ။ 5. ပင်စိမ်းစေ့ကို ကောင်းစွာကြိတ်ပြီးစားပေးလျှင် … Read more
ဝက်ခြံအမာရွတ်နဲ့ အမဲစက်တွေကို သဘာဝအတိုင်း ဖယ်ရှားပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်တွေအရ ကမ္ဘာ့လူဦးရေရဲ့ ၉၅ % မှာ ဝက်ခြံပေါက်ကြပါတယ်။ ဝက်ခြံနဲ့ အမဲစက်တွေက စားသောက်ပုံမှားခြင်း၊ အသားအရေထိန်းသိမ်းတဲ့ပစ္စည်း မှားယွင်းစွာသုံးစွဲခြင်း စတဲ့အကြောင်းရင်းများကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတုပစ္စည်းတွေ မသုံးဘဲ သဘာဝနည်းနဲ့ ဝက်ခြံအမာရွတ်တွေ၊ အမဲစက်တွေ ပျောက်ကင်းအောင်လုပ်နိုင်မယ့် နည်းလမ်းလေးတွေ ရှိပါတယ်။ ၇။ မျက်ကွင်းညိုခြင်းအတွက် နနွင်းနှင့် နာနတ်သီးဖျော်ရည် နနွင်းက မျက်ကွင်းညိုခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ နနွင်းကို လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်းနဲ့ နာနတ်သီးဖျော်ရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၂ ဇွန်းကို ရော၍မွှေပါ။ မွှေထားတဲ့ အနှစ်ကို မျက်လုံးတစ်ဝိုက်မှာလိမ်းပြီး ၁၀ မိနစ် ကြာအောင်ထားပါ။ ၁၀ မိနစ် ကြာရင် နူးညံ့တဲ့အဝတ်စလေးနဲ့ သုတ်ပေးလိုက်ပါ။ ဒီနည်းလမ်းလေးကို … Read more
သင့်မျက်လုံး အညောင်းပြေစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းများ တီဗီ၊ကွန်ပျူတာနဲ့ စမတ်ဖုန်းများ အသုံးများခြင်းဟာ ကြာလာတာနဲ့အမျှ မျက်စိကိုထိခိုက်လာတာ လူတိုင်းသိကြမှာပါ။ မျက်ရည်ပူကျခြင်း၊မျက်စိယားခြင်း၊ခေါင်းကိုက်ခြင်းတို့ကို ခံစားနေရပြီလာ:?ဒါဆိုရင်တော့ ဖုန်း၊ကွန်ပျူတာအသုံးပြုမှုကို ခေတ္တရပ်ထားရမှာ ဖြစ်ပြီး မျက်စိကြွက်သားများ အညောင်းပြေစေမယ့် လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ပြုလုပ်ပေးရမယ်နော်။ လေ့ကျင့်ခန်း (၁)-အမှောင်ထဲကိုငေးကြည့်ပါ။ -စားပွဲတစ်ခုပေါ်မှာ တံတောင်ဆစ်များကို ထောက်ပါ။ -သင့်မျက်စိ၂ဖက်ကို လက်ဖဝ ါး ဖြင့်အုပ်ပါ။ -စိတ်ကိုလျှော့ချပြီး အမှောင်ထုကိုခံစားပါ။ -မိနစ်အနည်းငယ်ကြာ ထိုအတိုင်းနေပါ။ လေ့ကျင့်ခန်း(၂)- မျက်စိကိုဘယ်ညာကစားခြင်း -မတ်တပ်ရပ်ပါ သို့မဟုတ် မတ်မတ်ထိုင်ပါ။ -ပထမဦးစွာ အရှေ့တည့်တည့်ကို ကြည့်ပါ။ -ထို့နောက် ခေါင်းကို မရွေ့စေပဲ ဘယ်ဘက်ကို စူးစိုက်စွာကြည့်ပါ။ -တဖန် ညာဘက်သို့ စူးစိုက်စွာ ကြည့်ပါ။ -ဘယ်ညာပြောင်းပြီး ၅ကြိမ်ခန့်ကြည့်ပါ။ ၃ကျော့ပြုလုပ်ပေးပါ။ လေ့ကျင့်ခန်း(၃)-မျက်စိကို အပေါ်အောက်ကစားခြင်း -မတ်တပ်ရပ်ပါ (သို့)မတ်မတ်ထိုင်ပါ။ … Read more
အသား လုံးဝမစားဘဲနေရင် ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ ဒါတွေ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်
အသား လုံးဝမစားဘဲနေရင် ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာ ဒါတွေ ဖြစ်လာလိမ့်မယ် အသားစားတာက ခန္ဓာကိုယ်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အသားဓာတ်နဲ့ ဗီတာမင်တွေ ရနိုင်တဲ့ အပြင် အရသာလည်းကောင်း တာကြောင့် အသားမကြိုက်တဲ့ သူ နည်းပါ တယ်။ အသားစားတာက ခန္ဓာကိုယ် အတွက် ကောင်းတဲ့ အချက်လည်း ရှိသလို၊ ဆိုးတဲ့ အချက်လည်း ရှိပြီး သူများအသက်သေပြီးမှ ရတဲ့ အစားအစာမို့ တချို့တွေ ကလည်း သားသတ် လွတ်စားကြ ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ ရက်အနည်း ငယ်လောက် အသားမစားဘဲ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ကိုပဲ မျှတအောင် စားတဲ့အခါ ဒီကောင်းကျိုးတွေကို ရပါ လိမ့်မယ်။ (၁) ဝိတ်ကျသွားမယ်။ အသားစားခြင်းက ခန္ဓာကိုယ်ကို ဖွံ့ဖြိုးစေ တာကြောင့် ကလေးတွေကို များများကျွေး သင့်ပြီး … Read more
ညအိပ်ခါနီး ခြေထောက်ဆေးပြီးတိုင်းနင်းကျစို့ ကဲ နင်းကျစို့ဗျာ ငွေလဲမကုန်ဘူး ညအိပ်ခါနီး ခြေထောက်ဆေးပြီးတိုင်းနင်းကျစို့ အုန်းမှုတ်ခွက်နင်းရောဂါကင်း သာမန်ခေါင်းကိုက်၊ ခေါင်းမူး၊နောက်ကျောတက်၊ ခါးနာ၊ခြေထောက်ကိုက်ဖြစ်ရာကနေ တစ်စတစ်စနဲ့ သွေးတိုးရောဂါ၊ လေငန်းရောဂါ၊ မျက်စိမှုန် ပါဝါတိုး၊ မျက်ရိုးကိုက်၊ အကြောတက် စသဖြင့် ရောဂါဟာ ကြီးထွားလာတတ်ကြပါတယ်။ ဒီလို လူတိုင်းအဖြစ်များနေတဲ့ရောဂါများဟာ ပထဝီဓါတ်နှင့် ဝါယောဓါတ်တို့ မညီမျှရာကနေစပြီး ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ဝေဒနာတွေပါပဲ။ အထက်ပါရောဂါများ မဖြစ်ရလေအောင်၊ ဖြစ်ပြီးသူများလည်း ရောဂါ သက်သာပျောက်ကင်းအောင် အုန်းမှုတ်ခွက်နင်းခြင်းဖြင့် ကာကွယ်နိုင်ကြပါတယ်။ အုန်းမှုတ်ခွက်နင်းခြင်းဟာ ရှေးမြန်မာဆေးကျမ်းများနှင့် ရှေးအိန္ဒိယဆေးနည်း၊ တရုတ်ဆေးနည်းများတွင်လည်း ဖော်ပြထားကြပါတယ်။လက်တွေ့ပျောက်ကင်းသူများလည်း အများအပြားရှိနေပါတယ်။ (၁) ခြေအသင့်နင်းနိုင်မည့် အုန်းမှုတ်ခွက် (၂)ခုကို ပရဆေးဆိုင် သို့မဟုတ် အုန်းသီးဆိုင်တို့မှာ မေးဝယ်ပါ။ (၂) အုန်းမှုတ်ခွက် (၂)ခုကို မှောက်လျှက်ထားပြီး ကိုင်စရာဝါးတန်း သို့မဟုတ် … Read more